Ngụgụ Okwu na Ọdịnaya Ogologo Ọdịnaya na SEO | Martech Zone
Mmetụta Ọdịnaya-Ogologo Na Nchọgharị Nchọgharị na Ntụgharị
Fraịdee, Nọvemba 20, 2020 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Ruo ogologo oge, naanị m na-anwa ịjụ ndị mbido ego na ndị ahịa buru ibu n'ihi na amaara m na m ga-enwe ike ịmegharị agịga ntụgharị ahụ n'ụzọ dị egwu na ụlọ ọrụ ndị nwere akụ na oge iji weghara òkè ahịa. N'afọ gara aga, na nke mbụ ya, ekpebiri m itinye otu usoro ahụ m jiri maka ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere mpaghara, obere ụlọ ọrụ… ọ nwere mmetụta dị egwu iji melite ogo ọchụchọ ha na ntụgharị ha.
Na isi nke atụmatụ a na idobe ihe ahịrị mmepụta ọdịnaya na, kama, na-emepe emepe a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya. Anyị na-elekwasị anya bụghị na periodicity ma ọ bụ ugboro nke anyị na isiokwu na anyị na-emepụta maka a ahịa, ọ bụ na-eme nnyocha na isiokwu ndị na-mmasị ha na ndị dị mkpa ka azụmahịa… na-ewu ma ha onwe ha na ụlọọrụ ikike na ntụkwasị obi na ndị ahịa. Etiti gbadoro anya na-ewepu ụlọ ọrụ ahụ, kama nke ahụ, na-etinye ndị ahịa ma ọ bụ atụmanya azụmaahịa na etiti ọdịnaya ahụ.
Iji maa atụ, enwere m ezigbo ndị enyi nwere ezigbo ego ma dịkwa ọnụ ala ikpo okwu ahia ala. Na njirimara dịka njegharị mkpanaka, ozi ederede, CRM, akwụkwọ akụkọ email, na akpaaka ahịa… ha nwere ike ịde maka atụmatụ na uru ndị ahụ kwa ụbọchị. Nke ahụ ga-etinye usoro ha na isi nke atụmatụ ọdịnaya ha.
Mana ọ gaghị ebuli ogo ma ọ bụ ntụgharị.
N'ihi gịnị? N'ihi na ndị ọbịa nwere ike ịhụ saịtị ha, gụọ banyere atụmatụ ha, ma banye maka akaụntụ nnwale n'efu. Ọtụtụ narị ndụmọdụ na usoro aghụghọ nwere ike ịnweta ụfọdụ mbak, mana ha agaghị agbanye.
Elekwasị anya na onye ọrụ na algọridim
Kama nke ahụ, Mara ihe na-arụ ọrụ akwụkwọ akụkọ, blog, na pọdkastị nke na-elekwasị anya n'ihe ịma aka na elele nke ịbụ ihe ịga nke ọma onye nwe ulo. Ha enweela mkparịta ụka gbasara okwu iwu, ego mgbazinye ego VA, mbugharị azụmaahịa, ụtụ steeti na gọọmentị etiti, akụnụba mpaghara, nhazi ụlọ, ịtụgharị ụlọ, wdg. Ihe ha lekwasịrị anya na ọdịnaya ha anaghị enye ndụmọdụ mgbe niile enwere ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ; ọ bụ inye nka sitere na akụrụngwa ụlọ ọrụ ga-enyere atụmanya ha aka yana ndị ahịa ha na-ere ọfụma ma na-azụ ahịa ha.
Ma ọ dịghị mfe. Nke mbu, ha gha achoputa ihe otu ubochi na ndu onye oru ha na okwu nile ha na-ama aka. Mgbe ahụ, ha ga-ewulite ọkachamara ha ma ọ bụ kpọbata ndị ọkachamara ndị ọzọ iji nyere ndị na-atụ anya ha aka na ndị ahịa ha. Ha ga-eme nke ahụ niile ka ha na-aga n'ihu na-asọmpi na ikpo okwu ha.
Agbanyeghị, mmetụta ọ bụ na ha na-aghọ nnukwu akụ na ụba n'ime ụlọ ọrụ ahụ ma na-ewulite mmekọrịta na-adịte aka na ndị na-ege ntị. Maka atụmanya, ha na-aghọrọ ndị na-atụkwasị obi n'ihe gbasara ịdị mma ha. Maka ndị ahịa, ha na-enyere ha aka ịmekwu nke ọma na obi ụtọ na ọrụ ha.
Ọdịnaya-Ogologo Ọdịnaya Ọdịnaya
Jụọ ọtụtụ ndị edemede ka ha kwuo okwu nyocha ma dee otu edemede, azịza ha bụkarị:
Gini bu okwu a na agwu?
Nzaghachi ahụ na-egbu m. Nke a bụ ihe ajụjụ kwesịrị ịbụ:
Kedu ndị na-ege ntị na gịnị bụ ebumnuche?
N'oge ahụ, onye edemede nwere ike ime nyocha mbido banyere asọmpi, akụrụngwa, na mmadụ nke ndị na-ege ya ntị wee laghachi na atụmatụ na ngwụcha akwụkwọ yana ụgwọ Achọghị m ịma banyere ogologo ọdịnaya; Achọrọ m ịma ọdịnaya zuru oke. Ọ bụrụ na m na-ebipụta otu edemede gbasara isiokwu, achọrọ m ịza ajụjụ ọ bụla metụtara ọdịnaya ahụ. Achọrọ m ịnye ụfọdụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ. Achọrọ m ịgụnye eserese, eserese, onyonyo na vidiyo. Achọrọ m ka isiokwu bụrụ akụkọ kacha mma na ịntanetị.
Mgbe anyị na-ebipụta akụkọ zuru oke, nyochara nke ọma karịa akwụkwọ ọ bụla ọzọ, ọdịnaya ọdịnaya ahụ na-adịkarị ogologo, n'ezie. Yabụ:
Ọ bụ ezie na ogologo ọdịnaya jikọtara na ogo ọchụchọ na ntụgharị, ọ naghị akpata ọkwa ka mma na ntụgharị. Vingkwalite ogo ọdịnaya na-akpata ọkwa dị mma na ntụgharị. Ma ogo ọdịnaya jikọtara ya na ogologo ọdịnaya.
N'iburu nke a n'uche, ka anyị lelee mmekorita (ọ bụghị ihe kpatara) nke ogologo ọdịnaya, njikarịcha njin ọchụchọ, na ntụgharị na ozi nkọwa a zuru ezu site na Capsicum Mediaworks, Kedu otu Ogologo Ọdịnaya si emetụta SEO na mgbanwe. Ọdịnaya dị elu nke nwere ọnụ ọgụgụ dị elu ọkwá dị mma karị, kesaa karịa, ọkwá dị elu karị, na-etinyekwu omimi, na-abawanye mgbanwe, na-eduga draịva, ma na-agbadata ọnụego bounce.
Nkwubi okwu di nkpa; ogo ụdịdị ogologo bụ mma ego.
Tags: ọdịnaya ọdịnayaogologo ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaogo ọdịnayanyocha ọdịnayaọdịnaya ọdịnayamgbanweOgologo oleole okwuka esi kwalite mmainfographicogologo ọdịnayaàgwàogoresearchAzuru okeokwu ọnụ
Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ gị ga-eji kwụọ ụgwọ maka DNS jisiri ike?